नेकपाले ६ महानगरसहित ७७ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज तोक्यो (नामावलीसहित)- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाले ६ महानगरपालिकासहित सबै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज तोकेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला इन्चार्ज र सह-इन्चार्जहरुको टुंगो लगाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले जिल्ला कमिटी सरह नै मान्यता प्राप्त ६ महानगरपालिकाका इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज टुंगो लगाएको छ ।
आइतबारको बैठकले विभाग भने गठन गर्न सकेन। विभिन्न विभाग, आयोग र निकाय र प्रवास विभाग एकीकरणका टुंगो लगाउन मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पुन: सचिवालय बैठक बोलाइएको उनले बताए।
यी हुन् नेकपामा७७ वटै जिल्लाका इन्चार्ज र सह-इन्चार्जहरु :
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। विभाग गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन लगायत विषयमा छलफल गर्न भन्दै आइतबार अपराह्न नेकपा सचिवालय बैठक बसेको हो।
महत्वपूर्ण विभाग शीर्ष नेतालाई दिने समझदारी नेकपाभित्र बनिसकेको छ। संगठन विभागको प्रमुखमा वामदेव गौतम, विदेश विभागको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माधवकुमार नेपालले पाउने लगभग पक्कापक्की भइसकेको नेताहरुले बताएका छन्। तर, आर्थिक विभाग, स्कुल र प्रचार विभागको भने टुंगिन बाँकी छ।
स्कुल विभागमा तत्कालीन एमालेका ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रतर्फका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी रहेको स्रोत बताउँछन्। आर्थिक विभागमा महासचिव विष्णु पौडेल आकांक्षी देखिएका छन् भने प्रचार विभागमा माओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ। प्रचारमा नेतृ पम्फा भूसाल अघि सर्ने देखिएकी छन्।
नेकपाको ३२ विभाग रहनेछन्। पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभाग लिने समझदारी भइसकेको छ।
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ १५:३५
श्रावण ५, २०७६ रासस
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आइतबार बसेको बैठकले यही साउन १६ गतेदेखि सातै प्रदेशका १२ स्थानमा दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसका उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिष्ठानको बैठकले डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानको आधार पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठन गरेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव मुक्ति आचार्यले जानकारी दिए । समितिका सदस्यमा डा. आरजु देउवा, हरिहर विरही, राजु नेपाल र प्रशिश महरा रहेका छन् ।
बैठकले तारानाथ दाहालको संयोजकत्वमा निर्देशिका निर्माण समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी खिलानाथ दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको स्रोत व्यवस्थापन समितिमा सुभाष पोखरेल, डा. प्रभु बुढाथोकी, भद्रा पराजुली भण्डारी, कमला लामिछाने, भगिरथ पोद्दार र योगराज शर्मा कँडेल सदस्य रहेका छन् ।
बैठकले कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम यही साउनभित्रै काठमाडौँमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ १४:५३